ရခိုင်တို့ရဲ့ရင်ဖွင့်သံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ရခိုင်တို့ရဲ့ရင်ဖွင့်သံ
Posted by မြို့ ဟောင်းသား on Jun 7, 2012 in Cultures | 30 comments
ခုရခိုင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းဝေ ဆိုတာကုလားတွေရဲလက်ကိုင်တုတ်ပါ။အကျင့်ပျက်လဘ်စားဆုံး လို့သိရပါတယ်။ခုစုံ
စမ်းဆစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကုလားတွေကငွေကိုပုံပေးထားတဲ့ အတွက် တာဝန်ယူရတဲ့လူတွေအားလုံးက ကုလားတွေရဲ့လက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်နေကုန်ပါပြီ။
ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သတင်းယူတာ ဦးထွန်းဝေဆီကဘဲယူတယ်လို့
ကြားသိရပါတယ်။ကျောက်နီမော်ကကောင်မလေးအသက် ခံရတာကို ဆုငွေတောင်ရလိုက်တယ်လို့ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။တရားခံအစစ်တွေကိုလည်း ကျောက်ဖြူရဲစခန်းမှာ လဲလည်လိုက်ပြီးရိုးမသစ်စာကားပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။
အဲ့ဒါကိုသလို့ တောင်ကုတ် သားတွေက ရိုးမသစ်စာနောက်ကိုလိုက်ကျတာပါ။ဒီလောက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်ကလူတွေ အခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်သေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။နောက် အဲ့ဒီ့ထဲမှာပါတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က ဒီလောက်ပြတ်ဿနာတက်နေတာတောင်
သူတို့ကျမ်းစာကိုတောင်ကုတ်ဂိတ်မှာဖွင့်ဖတ် ခဲ့တဲ့ လူတွေပိုပြီးဒေါသထွက်ကျတာပါ။သံတွဲကအထွက်ရွှေလီဆိုတဲ့ရွာမှာ ဂိတ်မှူးတွေက ပြန်လှည့်
ခိုင်းတာကို ဇွတ်တိုးပြီးဝင်သွားတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေက လုံးဝမထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ ဆိုင်ကယ်အစီး ၃၀၀လောက် လိုက်သွား ပြီးနေလသစ္စာဂိတ်တောင်ခြေမှာပြန်ကွေ့ခိုင်းပြီး
သံတွဲ နဲ့ တောင်ကုတ်လမ်းဆုံကို ခေါ်လာပြီးပေါက်ကွဲနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ၀ိုင်းသတ်လိုက်တာပါ။၅ရက်နေ့မှာလည်းသံတွဲမြို့မှာ ကုလားတွေအုပ်စုလိုက် ဓါးတွေတုတ်တွေနဲ့ အက်ဆစ်ပုံးတွေ
ကိုင်ပြီး ကြိမ်းဝါးခဲ့တာကို ရခိုင်တွေကသည်းခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးခံနေလို့သာ ဒီရိုဟင်ဂျာကုလားတွေမြန်မာပြည်ကိုဝါးမျိုမသွားတာပါ။ခုဆိုသံတွဲမြို့ရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှူန်းက
…#… သံတွဲ က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီတောင်းတဲ့ အတွက်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့သံတွဲမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ ၀န်ထမ်းပါ။
စိုး၇ိမ်မိတယ် .. ၇ခိုင်ပြည်ကြီး ၇ခိုင်တိုင်း၇င်းသားတွေနဲ့ အသက်ဆက် တည်တံ့ နိုင်ပါစေ ။
ကုလား..ကုလား..ကုလား…မုန်းထှာ။ ပြောရတာလည်းမောနေပြီ သိပ်တောင်မပြောချင်တော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပြောတော့ပြောချင်သေးတယ် ကျေးဇူးပါရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရေ။ မြန်မာပြည်ကို ကုလားနိုင်ငံ
မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူလူချင်းရက်စက်စွာ ရိုက်သတ်တာတော့ မှန်တယ်ပြောဘူး
တကယ်သာဆိုရင်တော့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း အမှန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုသာဆို ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်ဘူး ရခိုင်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာက်ကို တော်တော်အားကျတယ်ဗျာ .. အသက်ပင်စတေးရ ပလေ့စေ နိုင်ငံနှင့် လူမျိူးအတွက် အသက်ပေး ရဲတဲ့ ရခိုင်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာက် ကို တော်တော်လေးစားသွားပြီဗျာ .. ကျွန်တော်ကိုလည်း အကူအညီ လိုတာရှိရင်ပြောပါ … မြှောက်ပေးပါ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ကလည်း ဘ၀နှင့် အသက်ကို အမျူိးဘာသာ အတွက် စတေးဖို့အသင့်ပါပဲ …. ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကလည်း အမျိူးဘာသာ တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်နေတာပါ …..
ကျွန်တော်သိသလောက် ၅ ရက်နေ့မှာ တောင်ကုတ်ကလူတွေ ဆင်းလာတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် သံတွဲမူဆလင်ဘာသာဝင်များ စုစည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါသည် ။ သံတွဲ အ၀င်လမ်းတွေကို တောင်ကုတ်ဘက်ကော၊ ငပလီဘက်ကော သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအရပိတ်ခဲ့ပြီး ညနေ ငါးနာရီခန့်မှာမှ ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါသည် ။
လုပ်ပြန်ပီလား ဟ။မြို့ ဟောင်းသားရယ်. သံတွဲက ဝန်ထမ်းကများအကူအညီတောင်းလို့ တင်ရလောက်
အောင် သံတွဲသားတွေများ အဲ့လောက်ညံ့နေတယ်မကြားဖူးပေါင်။ခင်များကြည့်ရတာ နားလဲမပါ၊မျက်စိလဲ
ပါပုံမရဘူး။အဲဒီ သေသွားသူ(၁၀)ယောက်စလုံး ကျောက်နီမော်ဆိုတာ မရောက်ဖူးတဲ့လူတွေ။
သာဦး၊မြေဦး ရေ ခင်ဗျားက သေသွားသူ ( ၁၀ )ယောက်လုံး ကျောက်နှီမော်ကို မရောက်ဖူးဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိလဲ ….. မကူညီချင်နေ မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ …. ခင်ဗျား ကသွေးခွဲနေတာလား … ရခိုင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ခင်ဗျား ရခိုင်သာသွားနေလိုက် ….
အင် ကျနော်က. သံတွဲသားစစ်ပါခင်မျာ။တောင်ကုတ်မှာ လက်ရှိအဖွားတွေ၊အဒေါ်တွေနေပါတယ်။
ကျနော်လဲ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမယ့် တစ်နှစ်ကို (၃-၄)ကြိမ်ရောက်နေတဲ့မြို့ ပါ။တောင်ကုတ်မြို့ အကြောင်း
ကောင်းတာ တစ်ခုမှ မရှိလို့ ထည့်ကိုမပြောချင်ဘူး။
(၂)ရခိုင်တပြည်လုံးက အဆိုး အကောင်းစုပုံရာ အမှိုက်ပုံမြို့ 
(၃)လူမှုရေး အတော်ခေါင်တဲ့မြို့ ပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို သန့်ရှင်းစွာ စီးပွားရှာသူတွေရော၊ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တွေပါ ရှိနေတာပါ။ခုကိစ္စမှာ
ကျနော် မပြောပြချင်လို့ ငြိမ်နေတာပါ။ထိရောက်အောင် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် ဥပဒေပိုင်းကိုဘဲ
ကူညီဆောင်ရွက်ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်နိုင်ဖို့ ကို အားပေးသွားမှာပါ။
ကုလား၁၀ယောက်မှာ ၂ယောက်လောက်ဘဲအသိဥာဏ်ရှိတယ် ။ ကျန်တဲ့ ၈ယောက်က ယောက်ကျားတစ်
သူတို့ဂရုမစိုက်ဘူး လူဦးရေများဘို့အတွက်သာအဓိက။မြန်မာပြည်မှာမွေးကထဲကနေလာတဲ့ အစ္စလာန်ဘာ
သူတို့ကဆပ်ဆပ်ထိမခံနာနေကျတာ…ကဲ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ကောင်တွေက မောင်နှမချင်းတောင် ၁၂နှစ်
ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ခံနေလို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးမည်းမသွားတာ။နို့မို့ဆို မြန်မာပြည်
လူဦးရေ သန်း ၁၂၀လောက်ဖြစ်နေပြီ။
ရခိုင်ပြည်ကြီး အမှန်တရားအတိုင်း(ဥပဒေ) တည်တံ့ပါစေ။
ရခိုင်ပြည်ကြီး ရိုဟင်ဂျာရန် ကာကွယ်နှိုင်ပါစေ။
ရခိုင်ပြည်ကြီး စစ်မှန်သော ဘာသာ၊လူမျိုးများသာကြီးစိုးပါစေ။
ရွာသားအားလုံးကိုလေးစားတယ်ဗျာ … မျိုးချစ်စိတ် ရှိတဲ့သူတွေကော တရားတော် အတိုင်းနေထိုင်ကြသူတွေကော ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ … ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘုရားတည်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ …. အုတ်ခဲတွေ …… လိုရင်တော့ ယူပြီးတော့ ဆောက်ကြဗျာ …. သာသနာ့တော်ကြီး တည်တံနေမယ်ဆို ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ပြီးသားပဲ ……………………
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်(၃ ပုံ ၂ ပုံ ဆိုတာ)။ ဂွ မှာ မွတ်ဆလင်(ခုတစ်လော အပြောအဆိုဆင်ချင်ရတယ်) မရှိဘူး ဘလီမရှိဘူး။ ကျိန္တလီ မှာလဲမရှိဘူး။ နောက်တောင်ဂုတ်မှာလဲမရှိဘူးထင်တယ်(သိသူ များ confirm လုပ်ပေးပါ)။ သံတွဲက ထင်ရှားတဲ့ မာဃလမ်းလိုနေရာမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်က ၃-၄ အိမ်ထက်မပိုလောက်ဘူး။
ဂွမြို့နှင့် ဂွမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာ ခရစ်ယာန် ကိုးကွယ်သူတွေရှိတယ်။ ဂွကသူတွေက ခရစ်ယာန် တွေကို ချင်းတွေတဲ့။ သူတို့သိတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေက ချင်းလူမျိုးတွေပဲကိုး။ တောင်ပေါ်ကုန်း၊ ဆားချက် ဆိုတဲ့ရွာတွေ မှာဆိုအများဆုံးပဲ။ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာဆို သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပဲ။ state ကျောင်းတုန်းကသူတွေလေ။ ဒီနှစ်ပြန်တုန်းကတောင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာတွေ့တယ်။ဖက်လဲတကင်းပဲ(မတွေ့တာလဲကြာပြီလေ)။ ဆားချက်ရွာက ချင်းမလေးတွေဆို ကျွန်တော့်ကို သိပ်ကြည့်ကြတာ ကြုံတုန်းကြွားထားမှ :-)။ သူတို့ဘုရားကျောင်းလဲ ကျွန်တော်တက်တာပဲ၊ သူတို့ကလဲ ကျွန်တော်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုက်တာပဲ။ ခရစ်စမတ် ဆို သိပ်ပျော်သူတို့ဆီသွားပြီး ခေါင်ရည် အမှုးသောက်ပစ်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲ့ခရစ်ယာန် တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြသနာ တစ်ခါမှကိုမတက်ဘူး ဘူးဆိုတာပဲ။
ကျိန္တလီမှာ ဂွမှာ လုံးဝ မရှိတာ သေချာပါတယ်..
ကျွန်တော် အဲဒီ့ ဒေသတွေမှာ သုံးနှစ်ကျော် နေဖူးပါတယ် ..
အ၀င်ကို မခံတာပါ ..။
ရခိုင်တွေ က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးးသားတပ်ဦးပါ။ရန်ကုန်မှာရော ကုလားတွေ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ
နေကြသလဲ။စီပွာရေးမှာ ဘယ်လိုခြေကုတ်ယူထားကြသလဲ။ဘလီတွေရော ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ
ဆောက်ထားပါသလဲ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဘလီမရှိတဲ့ မြို့ ဘယ်နှစ်မြို့ ရှိပါသလဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ မျက်နှာချို လေးနဲ့ လေပြည်ထိုးနေမှာပဲ။ နောက်ဒီကောင်တွေ အင်အားများလာမယ်။
သူတို့နောင်တော်နိုင်ငံတွေက လက်နက်ထောက်ပံ့မယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင် နောက်မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ အစ္စလာမ်မစ် မြန်မာနိုင်ငံပေါ့ဗျာ။
သီးခံကြ သီခံကြ။ ကျွန်တော်မြန်မာတွေ ဒီလိုစည်းလုံးပုံနဲ့တော့ အင်းးးးးး
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက အရင်တုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနော် အခုရော ။၊
ကျွန်တော်ပြောတာ ဒီကောင်တွေကို ပြန်ချ ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကုလားတော့ အမျိုးမတော်နိုင်ဘူး။ အလကားနေရင်း မြန်မာကို ဆန့်ကျင်နေတာ။
ရေလိုက်ငါးလိုက်မနေနိုင်ဘူး။ မြန်မာတွေရဲ့ ခေါင်းရင်းခန်းက သူတို့အတွက် ခြေရင်းခန်း။
မြန်မာတွေ ခေါင်းထိုးအိပ်တဲ့ဘက် ခြေထိုးအိပ်တဲ့သူတွေ။လမ်းထဲမှာ အထပ်မြင့်တိုက်3လွှာတက်နေပြီး
ဒီလိုအခြေအနေတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာတင်ပြပေးပါ။ ဒါမှသာ မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရမယ် အတွင်းရန်သူကိုပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်ရပါမယ်။
ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကို သတိရမိတယ် ကုလားဆို အကုန်ပြန်ပို့ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်းကြောင့် ဒီလောက် ဘဲရှိတာ မဟုတ်ရင် ကုလားပြည်ဖြစ်တော့မယ် ။ ကုလားဆိုတာ ကောင်းတဲ့သူရှိပါတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး သို့သော် 10 ယောက် 1 ယောက်ဗျာ ။ မြန်မာပြည်က မြို့တွေ၇ွာတွေနယ်တွေမှာ ကျောက်ပန်းတောင်းလိုအကုန်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဗျာ ။ ကုလားဆိုတာ မြင်တောင်မမြင်ရဘူး။ ရခိုင်မလေး မစော်ကားခံပြီးအသတ်ခံရတုန်းကတော့ ဒီကုလားတွေဘာသံမှ မကြားပါဘူး ခုသူတို့ ကုလားအသတ်ခံရတယ်လဲကြားရော တရားဥပဒေအရတွေဘာတွေနဲ့ အသံထွက်လာတယ် ။ တစတစနဲ့ ကမ္ဘာ့နိူင်ငံအတော်များများမှာလဲ ကုလားပြည်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က ရခိုင်လူမျိုးတွေလို ကျောက်ပန်းတောင်းလို မြို့တွေမရှိတော့ ကုလားပြည်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဘာသာတရားတိုင်းဟာကောင်းဖို့အတွက်ထားခဲ့ကြကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာပါ ဒါပေမဲ့ လည်လှီးသတ်မှ ဆိုတာမျိုးကတော့ လက်ယဉ်အောင်လုပ်ပေးနေသလိုဘဲ။ တခုတော့သတိပေးချင်သည်ဗျာ မြန်မာ့သွေးရဲတယ်နော် အရေးကြီးရင် သွေးလဲနီးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့သွေး ရခိုင့်သွေးကို လာမစမ်းပါနဲ့လို့ သတိလေးတော့ပေးပါရစေ။လူသားချင်းစာနာလို့ပါ။
တို့ကတော့ ရခိုင်ဘက်ကပဲ မွတ်စလင်မုန်းလွန်းလို့
သူတို့က ဘယ်လောက်တောင်သွေးစည်းသလဲဆိုရင် သူတို့ဘက်က လူတစ်ယောက်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးက သူတို့လူမျိုးသူဌေးတွေက (နိုင်ငံခြားက လူတွေကပါ) ပိုက်ဆံပို့ပေးပြီးတော့ကို ကယ်ပေးကြတာ။
ပြီးတော့ သူတို့မှာ ဆုပေးစနစ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ သူတို့အဓိက လိုချင်တာ ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေပဲ။ ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့ရင် အဆင့်ဆင့်အလိုက် ဆုပေးသေးတယ်။ သာမန်မိန်းကလေးဆို ဘယ်လောက်၊ ဆယ်တန်းအောင်ဆို ဘယ်လောက်၊ ဘွဲ့ရဆိုဘယ်လောက်၊ ဆရာမလို အလုပ်မျိုးရထားရင် ဘယ်လောက် ဆိုပြီးတော့ ဆုပေးသေးတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ကြီးမားစွာနဲ့ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို တကယ်လေးစားပါတယ်…
တကယ် ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုရင်၊သို့ မဟုတ်လက်ရှိ
ဥပမာ-ဥပဒေလမ်းကြောအတိုင်း အရေးယူဖို့ လိုက်
ကြားဖူးလို့ ပါ။မရှိဘူးလို့ သက်သေမပြ
စကားဆိုတာ ပြောတိုင်းရပေမယ့် ထင်တိုင်းပြောရင်တော့ မကောင်းဘူး သတင်းဆိုတာလည်း အထောက်အထားနဲ့ရေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ
နိုင်ငံ ကြီး ကို ပြောင်လည်းစေချင်ရင် အောက်ချေလူတန်းစားတွေပါ ပြောင်းပြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အပေါ်က လူတွေက ဒီလိုဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် လူမျိူးနှစ်ခု ကြားမှာ ဘယ်လိုမှ သင့်မြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး….
ခုချိန်ထိ ပို့ စ်တင်သူမြို့ ဟောင်းသားပေါ်မလာပါလား။မအားဘူးနဲ့ တူပါတယ်။
အကို ဆက်သွယ်လိုတယ် ဆိုရင် ဦးဦးထွန်းဝေ ဖုန်းနံပါတ်ပေးမလို့ ။
ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြန်ရှာနေပါတယ်..
ရခိုင်ဘက်က စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ..ရခိုင်သားတွေတော်တော်များများလည်း ဖတ်ဖူးကြမှာပါ..
ကျွန်မကတော့ မြောက်ဦးက အစ်မတစ်ယောက်ဆီက ရတာပါ။
ဟုတ်တယ်…မွန်မွန်ရေ။ တင်ပေးပါ။ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေ ဒီလိုဆုပေးစနစ်တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ
အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံလိုချင်ပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့ရဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေ/ တခြားလူမျိုးအပေါ်ကောက်
ကျစ်စဉ်းလဲတာတွေ၊ သူတို့လူမျိုးသွေးနှောတဲ့ စီမံကိန်းအကြီးကြီးတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြနိုင်မှ
မွတ်စလင်ဘာသာဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးက ကွဲကွဲပြားပြားကောင်းဆိုးခွဲခြားနိုင်မှာပါ.။